Oge agụmakwụkwọ oge na-ekpo ọkụ n'etiti ikpo ọkụ ọkụ nke abụọ
Central Heating - Sanitary installer
Ndabere nke ụlọ ọ bụla
N'ime usoro mmemme kpo ọkụ ị ga-amụta ihe niile gbasara ikpo ọkụ. Ị mụtara idebe ọkpọkọ, ị mụtara ijikọta chaile ma wụnye radiators. Anyị na-akụzikwara gị ịrụ ọrụ n'adabereghị. Nhazi maka ikpo ọkụ kpo oku bụ ọrụ a chọrọ.
Anyị na-enye nkpo ọkụ kpo ọkụ & ọzụzụ ịkụ ụda n'ime usoro abụọ. Ịmụmụ ihe abụọ bụ nchikota nke ịmụta ọrụ na ịmụ akwụkwọ.
A ga-akwụ gị ụgwọ maka ụbọchị ị malitere ịrụ ọrụ.
Mgbe ọzụzụ gị gasịrị, ị nwere ike ịnye onye ọrụ ọhụrụ gị ọrụ dị ukwuu.
Igwe ọkụ na ngwongwo ọkụ bụ ọrụ mmepe. Enwere oké ọchịchọ na ahịa ọrụ na ụgwọ ọrụ dị elu.
Ị na-amụta na mmemme ahụ nnukwu kpo oku nakwa ihe niile mbepu. Kedu ka ị si etinye gas pipelines; esi jikọta mmiri na ike Anyị na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị ọcha ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ọkụ.
Ọzụzụ nnukwu kpo oku na plumber na-ewe na nkezi abụọ ruo afọ ise.
Ị na-amalite na nkwonkwo ọkụ ọkụ.
Na akwụkwọ nke nnukwu kpo oku Ị kwenyesiri ike banyere ọrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị ka bido.
Plumbers echegbu onwe ha banyere ahia.
Ịkwesighi ihe ọ bụla dị iche iche tupu ị mara ihe maka imetọcha ọkụ / kpo oku.
Ị na-arụ ọrụ na onye nhazi nke kpoo ọkụ ma ọ bụ ihe na-agba chaa chaa. I nwekwara ike ịrụ ọrụ dị ka onye ọrụ onwe ya.
Plumber bụ ọrụ kalama. Onye ọ bụla nke chọrọ ịrụ ọrụ ahụ ma nwee ike ime nke ọma jide n'aka na ọ bụ ọrụ a kwụrụ ụgwọ.
Enwere otutu plumbers n'ozuzu. Ya mere, enwere otutu oru. Karịsịa maka ọrụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ma ọ bụ ọkachamara, ọ dịghị asọmpi ọ bụla. Dị ka onye na-eme ka ị na-eme ka ị mara ihe, ma na-eto eto site na ịmepụta ụlọ ọrụ gị.
Ngwongwo na-etinye, na-arụkwa ma na-edozi nrụnye na ọkpọkọ, dị ka sistemụ ọkụ ma ọ bụ ebe obibi ọcha. Iji mee nke a, ọ ghaghị ịmalite iji nlezianya nyochaa ọnọdụ ahụ ma gee ihe ndị ahịa chọrọ. Ọrụ gụnyere ma nhazi nnukwu na nhicha nke sink zoro ezo. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe doro anya ka a rụọ, Plumber ahọrọ ihe ndị kwesịrị ekwesị na akụrụngwa iji nyere ha aka iso.
Kedu ihe ị na-enweta?